लेखक तथा नेकपाका पूर्व केन्द्रीय सदस्य गुणराज लोहनी गिरफ्तार, कहाँ पुर्याइयो ? — Sanchar Kendra
लेखक तथा नेकपाका पूर्व केन्द्रीय सदस्य गुणराज लोहनी गिरफ्तार, कहाँ पुर्याइयो ?
काठमाडौं । लेखक तथा राष्ट्रिय जागरण मञ्चका संयोजक गुणराज लोहनीलाई प्रहरीले चितवनबाट गिरफ्तार गरेको छ । सोमबार बाटोमा हिडिरहेका बेला उनलाई अ’पहर’ण शैलीमा प्रहरीले गिरफ्तार गरेको उनको पारिवारिक स्रोतले संचारकेन्द्रलाई बतायो ।
उनलाई केकति कारणले गिरफ्तार गरेको हो भन्ने विषयमा प्रहरीले केहि जानकारी नदिएको उनकी जीवन संगीनी सरला रेग्मीले संचारकेन्द्रलाई बताइन । लोहनीलाई सोमबार दिउसो चितवनबाट समातेर जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनमै राखिएको बुझिएको छ ।
यता, संचारकेन्द्रको टेलीफोन सम्पर्कमा आएका जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनका प्रवक्ता एकनारायण कोइरालाले यस विषयमा आफुलाई कुनै सुचना नै नआएको बताए । उक्त गिरफ्तारीको विषयमा जान्न खोज्दा प्रवक्ता कोइरालाले उल्टै ‘सूचना कहाँबाट आयो भनेर’ हास्यास्पद जवाफ फर्काए ।